रहेनन पूर्वमुख्यसचिव मल्ल - Sabal Post
रहेनन पूर्वमुख्यसचिव मल्ल
१२ असार २०७६, बिहीबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
ललितपुर– पूर्वमुख्यसचिव बलरामसिंह मल्लको आज निधन भएको छ । मिर्गौलाको क्यान्सरबाट पीडित मल्लको ७८ वर्षको उमेरमा विहीवार बिहान ३: १५ बजे मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरमा निधन भएको मल्लका भाइ राजुमानसिंह मल्लले जानकारी दिए ।
ललितपुरको भ्याली होम्स कोलनीमा बस्दै आएका उनी लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित थिए । वीरगञ्जमा जन्मिएका मल्लको क्यान्सर रोगका कारण पाँच वर्षअघि मिर्गौला फालिएको थियो । स्वर्गिय मल्लकी श्रीमती जमुना मल्ल, एक छोरा र तीन छोरी छन् । विसं २०४८ मा नेपाल सरकारको सचिवमा नियुक्त मल्ल २०५३ देखि २०५६ सालसम्म मुख्यसचिव थिए ।
त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरेका थिए ।उनी जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतसमेत थिए । मल्लको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनलाई छोरा ब्रजेश मल्लले दागबत्ती दिएका थिए ।
पशुपति बिस्कुट उद्योग र वीरगञ्जको सरस्वती कपडा…
लेखकको निधनप्रति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त
गाई पाल्दा ५० लाख स्वाहा , दूध…
परिवार नियोजन संघको प्रदेश संयोजकमा ज्योती पन्थी…
सडक विस्तार क्षेत्राधिकार छुट्टाउने काममा अघि बढ्दै…
रुपन्देहीको देवदहमा आज्ञात समुहको आक्रमणबाट एक जनाको…
वालिङ जेसीजद्धारा कोरोनकोषमा सहयोग हस्तान्तरण
प्रतापपुरको वडा न ७ द्वारा २सय २० घरधुरीलाई राहात बितरण
बर्दघाट नगरपालिकाको वडा न. १० का ६१ घरपरीवारलाई राहात बितरण
नेपाली कांग्रेस सप्तरीका युवा नेताहरु द्वारा सरकारसँग ७ बुँदे माग
बर्दघाट नगरपालिकाको वडा न. ८ मा राहात बितरण
फेसवुकमा कमेन्ट गरेको भन्दै मानन्धरलाई पक्राउ गरीएपछी नेविसंघ नेताहरुको विरोध…
बिमा अभिकर्ता र सर्भेयरको इजाजतपत्र नवीकरण वैशाख मसान्तसम्म
नेविसंघ स्याङ्जाका नेता मानन्धरलाई रिहाई गर्न नेविसंघ महामन्त्री पाण्डेयको चेतावनी
लालबन्दीले स्थापना गरेको विपन्न सहायता कोषमा साँढे ११ लाख संकलन
लकडाउन र प्रदेश सांसदका खान्की : जिम्बुले झानेको दालदेखि डम्फे…